Big City Small World (Series3Episode 8 - Speculate To Accumulate) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on September 23, 2013 at 10:43 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series3Episode 8 - Speculate To Accumulate (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၈) - ချမ်းသာဖို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း)
Fadi has spent most of the money that Johnny and Harry invested. Can he convince them to put in more capital again?
ဖာဒီဟာ ဂျော်နီနဲ့ဟယ်ရီတို့ထည့်ထားတဲ့အရင်းထဲက အများစုကိုသုံးပြီးသွားပြီ။ သူတို့ကိုထပ်ထည့်ဖို့သူစည်းရုံးနိုင်ပါ့မလား။
Series3Episode 8 - Speculate To Accumulate ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
ဟူးရေး ပြန်လာတာကြိုဆိုပါတယ် တိုနီ။
အမ် ချီးယားစ်။ ကျေးဇူး။
တကယ်တော့ . . .
ငါစဉ်းစားနေတာ။ တစ်ခါတစ်လေတော့ လက်ထောက်တစ်ယောက်ရှိတာအကျိုးရှိတယ်လို့။ နင်သိလား။ ကိုယ့်ကိုကြိုကြားကြိုကြား ကူပေးမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ပေါ့။
ကဲ မင်းသိတဲ့အတိုင်း ငါ့ကိုယ်ပိုင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု တကယ်ဖွင့်ချင်နေတာ။
အေး ကောင်းတယ်။ ဒါမင်းအတွက်အတွေ့အကြုံကောင်းရတာပေါ့။
ထင်တာပဲ။ ဘာလို့မလုပ်ရမှာလဲ။ သေချာတာပေါ့။
တိုနီတခြားတစ်ယောက်ကို “ကျေးဇူး”ပြောတာ ဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြားဖူးတာပဲ။
ကဲ ဖာဒီ။ ငါတို့ရဲ့စီးပွားရေးကြီးကော ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲ။
အမ် . . . မင်းတို့ကိုပြောစရာသတင်းနည်းနည်းရှိတယ်။
အင်း ကနဦးငွေပင်ငွေရင်း မတည်ဖို့ ပြဿနာနည်းနည်းရှိနေတယ်။
အဲ အဲဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ ငါဆိုလိုတာက ငါရင်းနှီးထားတယ်။ အဲဒါ ငွေတစ်ချို့သုံးထားလိုက်ပြီ။
လူထုသတင်းပြန်ကြားရေး။ ၀ဘ်ဆိုက်တစ်ခုထောင်တယ်။ သိတယ်မဟုတ်လား အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေလေ။
ဒါပေမယ့် . . .
အင်း ဒါစီးပွားရေးလေ မဟုတ်ဘူးလား။ ငါတို့ပိုက်ဆံထပ်မရရင် ဆက်လုပ်လို့မရဘူး။
အခုလောလောဆယ် ငါတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပေးတဲ့ပိုက်ဆံကို မင်းသုံးထားလိုက်ပြီ။
ချမ်းသာဖို့စွန့်စားရင်းနှီးရမယ်လေ။ စိတ်ရှည်စမ်းပါ။ ငါတို့အောင်မြင်ဦးမှာပါ။
ငါတို့မအောင်မြင်ရင်တော့ ငါကားလို့စ်နဲ့ ဒီကော်ဖီဆိုင်မှာဝင်လုပ်ရဦးမယ်။
Permalink Reply by Zar Chi Phyo on September 23, 2013 at 16:42